အတု…။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » အတု…။	26
Posted by black chaw on Feb 25, 2016 in Arts & Humanities, Creative Writing, Thakhin: CJ Only | 26 comments
၀င်းဦး အတု ပေါ်ခဲ့ဖူးတယ်။
ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်း အတု ပေါ်ခဲ့ဖူးတယ်။
မြတ်လေး အတု ပေါ်ခဲ့ဖူးတယ်။
ကျော်ဟိန်း အတု ပေါ်ခဲ့ဖူးတယ်။
ရာဇာနေ၀င်း အတု ပေါ်ခဲ့ဖူးတယ်။
ကိုယ်ပိုင်စတိုင် ရှိသော မင်းသားတွေသည်
တုပခြင်းကို ခံကြရပါတယ် ခင်ဗျာ။
အတုတွေ ထဲမှာတော့ ကျော်ဟိန်းအတု မြို့တော်ချစ်ဖွယ်ကို
အင်းမ ကျောင်းကြီးပွဲတော်မှာ ကြည့်ဖူးတယ်။
ကျော်ဟိန်း ကို အရမ်းကြိုက်နေချိန်မှာ ကျော်ဟိန်း ပို့စ် တွေနဲ့
ဟာသတွေ လုပ် လုပ်သွားတာ အရမ်းမိုက်တယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။
အောင်မယ် သီချင်းဆိုတာတောင် ကျော်ဟိန်းသီချင်းကို
ကျော်ဟိန်း နဲ့ အတော်တူအောင် ဆိုနိုင်သော ချစ်ဖွယ်ပါဗျာ။
ကျော်ဟိန်း ပို့စ်တွေပါ ပေါင်းထည့်လိုက်တော့
ချစ်ဖွယ်သီချင်းဆိုရင် လက်ခုတ်သံတွေ လက်ခေါက်မှုတ်သံတွေ
ချစ်ဖွယ်သည်လည်း ကျော်ဟိန်းပုံစံ တွေအောက်က
ရုန်းထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စတိုင် တစ်ခု မထူထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အခါ
ကျော်ဟိန်း နဲ့အတူ တက်ပြီး ကျော်ဟိန်းနှင့်အတူ ကျခဲ့ရတာပါပဲ။
နောက်ပိုင်း ဇာတ်ကိုနားပြီး ရုပ်ရှင်လိုင်းမှာ ဇာတ်ပို့ဝင်လုပ်နေလေရဲ့။
သူ့ အရပ်နဲ့ သူ့ ဇာတ်ကတော့ ဟုတ်လို့ပဲ။
အခုခေတ် မင်းသားတွေထဲမှာတော့ အတုလုပ်ခံရသူ
နေတိုးအတု တို့ ပြေတီဦး အတု တို့…ကြားများ ကြားမိကြသလားဗျ။
ဟိုတုန်းက ကျွန်တော့် စာရေးဟန်ဟာ ဆရာ သိမ်းတင်သား ရဲ့
ရေးဟန်အတိုင်း ချွတ်စွတ်နည်းပါး တူအောင် ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ မိတ်ဆွေရင်း တချို့ရဲ့ အကြံပေးမှု အရ
ဆရာသိမ်းတင်သား ရဲ့ ရေးဟန်ကနေ ရုန်းထွက်နိုင်အောင်
လုံးဝကြီး ရုန်းမထွက်နိုင်သေးပေမယ့် မတူတော့ဘူးလို့တော့
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က သိမ်းတင်သား အတုကြီး ဖြစ်နေခဲ့တာပါလား။
Thint Aye Yeik says: ဒါကတော့ ကြာနီကန်အတု…. .လောလောဆယ် ကြိုက်နေတဲ့ အတုမို့… မကြာခဏ ပြန် ကြည့်နေမိ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။
ဦးဦးပါလေရာ says: အတုဆိုတာ..
ဘယ်ဟာရဲ့ အတု လဲ …ဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်..
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အတုဆိုမှတော့ အစစ်နဲ့ တူတာ နီးစပ်တာ ရှိလို့ပေါ့..
မသိမသာ လွှမ်းမိုးခံနေရတာမျိုး ရှိနေတတ်ပါတယ် ကိုပါကြီးရေ။
ကာရာအိုကေ ဆိုင်မှာ အပျော်တမ်းသီချင်းဆိုတာတောင်
ထူးအိမ်သင် နဲ့ တူအောင် ဆိုမိတာမျိုး…၊
စိုးလွင်လွင် နဲ့ တူအောင် ဆိုနေမိတာမျိုး…တွေပေါ့။
အခုနောက်ပိုင်းတော့ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လေး နဲ့ စာရေးနိုင်အောင်
ကိုပါကြီးတို့လို မိတ်ဆွေတွေကို အသိပေးတိုင်တည်လိုက်တဲ့
ကွန်းမန့်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုပါကြီးရေ။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: အတု ဂျပု ဂလု ငပု လအု အဲ ဟုတ်ပါဘူး ဂတော့ဂတော့
ဘလက်အတုနဲ့ ညားပြီး စောစီး ဂိမ်းနေမယ်
ကျော်က ဖြတ်ထားတာ ငုတ်တိုပဲ ကျန်တယ် အေးဆေးပဲ
black chaw says: @ စိန်မျောက်မျောက် ;
ဦးလေး က လျှော့ သောက်တဲ့အပြင်
ဖြတ်ကို ဖြတ်ထားလိုက်ပါပြီ ဗျာ။
အသက်ကို ဥာဏ်စောင့် ဆိုတဲ့ စကားကို
ခင်ဇော် says: ခါတလေများ အတုတွေ နဲ့နေသားကျသွားရင်
အစစ်ကိုတောင် ရန်သူထင်မိတတ်တာကလား ကျောင်းဒကာရဲ့။
လူ့သဘော ဆိုတာလည်း အခက်သားကလားးး
စောစောစီးစီး ခင်ဇော် တရားလာဟောတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ ဦးဘလက်ရယ်။
ခုတလော စိတ်တွေထွေနေတာနဲ့ များများတွေးတော့ တရားသဘောလေးတွေ တွေ့မိလို့ပါ။
ဟားဟား အတု လုပ်တာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ တရုတ်ကြီးရဲ့
အိမ်နီးချင်းဖြစ်နေတာကလည်း အတုတွေ နဲ့ ယဉ်ပါးသလို
ဖြစ်နေရခြင်း ရဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲပေါ့။
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးပေးသွားတာ အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါဗျာ။
uncle gyi says: အတုလည်းကြာရင်အစစ်တောင်ပျောက်ပြီးအတုမှစစ်တာတဲ့
ကာတွန်းလေး တစ်ခု ဖတ်ဖူးတယ်။
မင်းအတွက် ငါ ဂျိုးသိန်း ဆေးပေါ့လိပ် အစစ် ၀ယ်လာတယ်ကွ လို့
နောက်တစ်ယောက်က ဆေးပေါ့လိပ် အစစ် ဆိုတာကြီးကို
မီးညှိပြီး ဖွာလိုက်တာ ချောင်းတဟွတ်ဟွတ်ဖြစ်ရော။
မင်းအစစ် ဆိုတာကြီးက ဒို့ အတုလောက် မစွံပါဘူးကွာ တဲ့။
Yin Nyine Nway says: ကောင်းသောအတုခိုးတာပဲဗျာ
black chaw says: @ Yin Nyein Nway ;
မတွေ့တာတောင် အတော် ကြာပြီနော်။
ရင်ငြိမ်းနွေး ရေ နေကောင်းရဲ့လားဗျ။
HMM says: စံထားလောက်စရာတွေမို့ စု၊တု၊ပြုတာ လက်ခံလို့ရပါတယ်…
ခက်တာက စုပြီးတုတဲ့အဆင့်မှာ တစ်သွားတာပဲ… ပြုတဲ့အဆင့်ရောက်မလာတော့ တန်းမမှီတော့ဘူး။
ဘာရယ်မှုတ် ကြားဖူးတာ လာရွှီးကျိတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ HMM ;
စံထားလောက်စရာ ဆိုတာမျိုးက ဘယ်လိုအရာတွေတဲ့လဲဗျာ။
ခင်ဇော် says: ဘာရယ် အဟုတ်ဘူးး
နီနီ ပေ့ချ မှာ မြင်လို့ လာပြတာ။
အဲဒါ အဲဒီ နှုတ်ခမ်းနီ လိုချင်လို့။
” Super Red ”
ပရိတ်သတ်များ ရှင့် …အနီရောင်အခွေရဲ့အမှတ်တရ အနေ နဲ့ပရိတ်သတ်ကြီး ကို “Super Red” နာမည် နဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် နှုတ်ခမ်းနီ ကို မကြာမီ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ထုတ် ပေးတော့ မှာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်ကျော်ထဲ က ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် နီနီတယောက်ထဲ ကြိုးပမ်းရတာမို့ အခု အနီရောင် DVD နဲ့အတူရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်စားပေးပါနော်။
နီနီ အကြိုက်ဆုံး နှုတ်ခမ်းနီ colour များကို အကြိုက်ဆုံး Design ၊ အကြိုက်ဆုံး Quality များနဲ့ ချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက်….
2016 အတွက် အ ထူး ခြား ဆုံး …..
Please share for me…. Mwah;???
kai says: စု၊ တု၊ ပြု လို့ဆိုတာပဲ…
ဒီမှာကျ.. အတုခိုးသမားကို.. ကော်ပီကက်… တဲ့..။
ကော်ပီကက် လေး မောင်ဘလက်ချော ပေါ့ဗျာ။
Crystalline says: တခြားအတုကတော်သေး… ဘလက်အတုမိတာတော့ တော်တော်ရင်ခံတာရယ်. .. Duty Free မှာလောက်ပဲ..စိတ်ချရတယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
ဘလက် တွေက အတုပေါတယ်ဗျ။
ညည်းက အရက်သောက်လို့ လား???
nozomi says: ကတိ အတုရောကြုံဘူးလား ဗျ
ဘာပြန်ပြော ရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူးဗျာ။
ကတိ အတု တဲ့လား။
ပေးတဲ့ ကတိမျိုးလဲလို့ 
အောင် မိုးသူ says: ကိုယ် အိုင်ဒေါင်ဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ အငွေ့အသက်တွေ ကိုယ့်အရေးအသားမှာ ပါတာ မဆန်းပါဘူး အူးဘလက်ရေ။ အဲ့လိုကိုက ရေးရင်း ရေးရင်း ကိုယ်ရေးဟန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လိုပဲ ကျတော်ကတော့ မြင်ပါတယ်။
အဲ့ဒါလေး ကိုယ်လည်း သဘောကျပါတယ်။
ကိုယ်လည်း အဲဒီလိုပဲ မြင်မိပါတယ် ညီလေးရေ။
မွန်းကျပ်ပိတ်လှောင်မှု တွေ များပြားလှတဲ့ စာဖတ်သူတွေအတွက်
သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ မဖတ်ရအောင်
လွယ်ကူစေတဲ့ ရေးနည်းရေးဟန် မှန်သမျှ ကိုယ်ကတော့
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .လောကကြီးရီလည်းရီရတယ်..တစ်ခါတလေ အတုကအရင်ဆိုင်ပေါ်ရောက်နေပြီ
.စကားမစပ်..နိုင်ဂျံဂါးရုပ်ရှင်ကိုမြန်မာ တုရိုက်တာတော့ညံ့လှသဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
နာမည်အရင်းပဲ ပြန်ရေးလိုက်တယ် ကိုမိုက်ရေ…။
ကိုမိုက် အတုကြီး ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ပါဗျာ…။
ကျွန်တော် အဓိက ဇောင်းပေးချင်တာက
ကိုယ်ပိုင်စတိုင် ကိုယ်ပိုင်ဟန် တစ်ခု မတီထွင်နိုင်တော့
ကိုယ်အတုခိုးနေတဲ့ အနုပညာရှင် အကျမှာ
လိုရင်းမရောက်သွားတာကတော့ ကျွန်တော် စာရေးညံ့လို့ပါဗျာ။
kotun winlatt says: အတုတွေနဲ့ အတူနေရတာကြာတော့ အစစ်ပဲထင်နေမိတော့ပါပဲ ဦးဘလက်ရာ